TPLF, BIYYA SAAMAA bahanii.? Eeyyeen OPDOn hoo? Saamuu biras darbanii saamsiisaas Turan. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTPLF, BIYYA SAAMAA bahanii.? Eeyyeen OPDOn hoo? Saamuu biras darbanii saamsiisaas Turan.
TPLF, BIYYA SAAMAA bahanii….? Eeyyeen
OPDOn hoo? Saamuu biras darbanii saamsiisaas Turan.
TPLF , oromoo ajjeesaa fii hidhaan gocha himamee hin dhumne Saba kanarraan geessaa turanii………? eeyyeen akka gaariitti.
warra afaan keenya hin beekne afaan ta’aniifii warra eenyummaa keenya hin beekne , eenyummaa keenya saaxilanii, warra qabeenya keenya hin beekne akka diinaatti , saaxilanii, manaaf qe’ee keenya keessaa warrii nugursiisee, nu qalsiisaa ture, warrii oromoo ajjeesiisaa ture, warrii oromootti dharaan itti yakkannii , qabeenya saamsiisaa turan, warra nageenya Saba kanaa dhoorkuun TPLF caalaa Saba oromoo warrii diina caalaa nutti diinoome OPDO dha.
TPLF , Saba oromoo gurguraa turee..? Lakki
OPDOn hoo ,,,,? Warra Saba oromoo firoottan fagoo mitii, jaartiif obboleeyyan ofiituu , akka ajjeefamaniif akka hidhaatti laamshayan warra gurguraa tureedha.
TPLF, waggaa 27 kana guutuu keessatti bu’aa buufattee jirtii……????? Eeyyen akka gaariitti.
Saba ofii duroomsuun , hardha abbootii qabeenyaa gurguddoo adunyaa irratti sadarkaa ol aanoo qaban godhaniiruu, Saba ofii aangoomsuun , biyya ofii IFAA, BISHAAN , DAANDII KONKOLAATAA, MANNEN YAALAA, MANNEE BARNOOTAA, DHAABBATOOLEE GURGURDOO, INDUSTIRIIWWAN hedduun biyyaaf Saba isaanii misoomsanii jiru.
Saba ofii hiyyoomsuu, Saba oromoo kana diinoomsuu, lafa irraa buqqiisuu,. Barnoota irraa hidhaattii darbsiisuu, uummata oromoo biyyarraa ariisisuun ,oromiyaa keessatti uummatnii GIBIRAAN hiyyoomsuu, DAANDII KONKOLAATAA Dhabuun , BALAA KONKOLAATAAN Kan hafes akka du’an gochuu, IFAA fii MANA YAALAA, Dhabuun oromoo ajjeesuu, OROMIYAA MANNEN HIDHAA balbalummattii ijaaruun waggaa 27 warra gocha HALAGAAN hin raawwanne, oromoo irratti raawwataa turaniidha.
Kanaaf TPLF waliin biyya ETHIOPIA jedhamtu takka qabaachaa, waliin mari’achuun yakkaafii badiittii ilaalama taanaan OPDO waliinis mariif yaadnii waliin taasifamu hunduu dhorkamuu qaba.
Sababbiin isaas OPDO Maqaa jijiratan malee warruma kaleessaatiin hardha jiraataa jiran waan ta’eef..